Home Wararka Farmajo, Fahad, Cabdiraxman Dheere iyo Cabdishakuur Cali Mire waa in Dalka laga...
Farmajo, Fahad, Cabdiraxman Dheere iyo Cabdishakuur Cali Mire waa in Dalka laga Qabtaa.
Run ahaantii doorashadii Jawhar ka dhacday ee Sanetor Muuse Suudi Yalaxow waxay qoreytay taariikh iyo aragti cusub oo keeneysa ina mar kale aan u baahannay inaan dib u fekerno dalkeenna.
Maxamed Cabdullahi Farmajo iyo kooxda ku shaqeysataa waxaa muuqata inay u ciil qabaan dagaal sokeeye oo aysan fahamsaneyn cawaaqibkiisa, halka Senetor Muuse Suudi oo yaqaanna waxa uu dagaal sookeeye yahay uu sanduuqa codka ku dagaallamayo inuu wax ku noqdo, sidaasna uu laba jeer wax ku noqday iyadoo Farmajo uu qori iyo inuu dagaal Xamar ka rido uu geed dheer iyo mid gaaban u fuushan yahay iyo kooxda dambiileyaasha ah.
Farmajo waxaa uu iloowsan yahay in haddii ay xabad bilaabato inuu yahay qofka ugu horreeya ay xabadda lala doonan doona oo ay suuragal tahay in uu ku dhinto caqli xumadiisa. Ilaa intee jeer ayuu Farmajo ku dhaqaaqay falal keeni kara in qoriga lagu kala baxo hasa yeeshee laga roonaaday? Wuxuu sii wadaa in maalin walba qaado tallaabo mudan in xabad looga jawaabo balse dadka Muqdisho degan oo fahamsan dhaxalka dagaallada sokeeyey ayaa intaas diidan inay xabad wax ku raadiyaan iyagoo saacad wax ka yar kula wareegi kara dhammaan Xamar.
Dadka Xamar deggan iyo hogaamiyayaasha ka soo jeeda degaankooda waxay muujiyeen biseyl siyaasadeed oo ah wax wadahadal iyo shaqo lagu hei karo aan qori lagu raadin. Maaha awood yari ciidan iyo cudud dhaqaale waa caqligooda oo ka koray halka ay weli joogaan Farmajo iyo Kooxdiisan.
Farmajo waxaa uu joogaa inuu u diido caddaallad sarkaal haween ah oo aan raqdeeda iyo ruuxeeda midna la lahayn, isoo difaacaya dadkii uu raadka soo galay in la nadiifiyo oo dembilawaayaal laga dhigo ama lagu caddeeyo eedeaha loo haysto kadibna qabsado dembiga haddii uu ku cad yahay.
Fahad yaasiin, Cabdiraxman Kulmiye oo loo garan og yahay Cabdiraxman dheere, iyo Cabdishakuur Cali Mire waa kooxda Farmajo godka ku ridaya oo aasi doono inta ay is leeyihiin Xamar dagaal sokeeye geliya. Kooxdaan waxay dadka Xamar kula kaftamaan annaga iyo reeraheenna maxaa naga gubanaya iyo ma dhaceyso inaan ka tagno daarahaas dhaadheer haddii aan xukumeyn waa inuu dagaal dhacaa oo ay Xamar duntaa.
Aragtidaan waa dareen ay isla qabaan Fahad, Farmajo, C/Dheere iyo CCMire oo ay ku dhex fidiyaan bulshada wax magaratada ah iyo kuwa dhuniraacdyada ah oo iyaga uu hunguriga wado sida Cuar Finish oo dadka Xamar u dhaca kooxdaan.
Ugu dambeyn dadka Xamar waa inay iska qabtaan kooxdaan dulmiga ku heshiisay oo ujeedada gurracan wata rabana in Xamar uu mar kale dagaal sokeeye ka dhaco, waa inaysan la baxsan wixii ay halleeyen si ay cashar ugu noqoto siyaasiyiinta soo socdaa ee ku fakeri kara hebelba looma qabsan ee adigana samee.
Talo dadka Somaliyeed waa inay ku baraarugaan in qofka wax oo loo dhiibanyo uu maro hannaanka caalamiga ah ee qof lagu doorto oo ah in la iska hubiyo oo:
Waa in la dib eego taariikhdiisa iyo wixii uu soo qabtay, waayo golayaasha barlamaanka iyo wasiirada, taliyayaasha ciidamada waxaa laga dhigaa qof reer hebel lagu keenay oo nolshiisa wax horumar ah aan sameyn oo xataa caruurtiisii dayacay hadduuba leeyahay , walaalahiisna ay eed u hayaan sida Farmajo.
Qofka fiican waa in loo eegaa xataa inay shaqadaan tiisa tahay iyo inuu meel kale ku haboon yahay oo Xamar laga bilaabaa qof u qalba iyo jagao u qalanta (meritocracy) .
Qofkasta ee ku takri falaa awoodda shacbiga siiyey (dowladda) waa inuu bixiyaa qiimaheeda oo loo qolaa.
Marka ugu dambeysa waa in loo qoolaa khaladkii ay dalkaan ka galeen Farmajo, Fahad, Cabdiraxman Dheere iyo Cabdishakuur Cali Mire